आदिवासी साहित्यकारहरूको राष्ट्रिय भेला फागुन अन्तिममा हुने - Limbuwan khabar
आदिवासी साहित्यकारहरूको राष्ट्रिय भेला फागुन अन्तिममा हुने
मङ्गलबार, २० माघ, २०७७ रातीको १०:०२ बजे, लिम्बुवान न्युज
काठमाडौं। आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासंघ, नेपालले राष्ट्रिय भेला फागुन अन्तिममा गर्ने भएको छ । सिमान्तकृत समुदायका सर्जकहरूको कार्यनीति एवम् रणनीति तय गर्न आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूलाई थप उचाइमा पु¥याउनका लागि भन्दै महासंघले भेला आयोजना गर्न लागेको हो ।
जुममार्फत बसेको समितिको पूर्ण बैठकले फागुन २९ र चैत १ मा दुई दिने राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेको संयोजक राजन मुकारुङले बताए ।
संयोजक मुकारुङका अनुसार भेलामा केन्द्रीय समिति, राज्य समिति र प्रवास प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने छन् ।
‘आदिवासी एवम् सिमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू साहित्य र सिर्जनामार्फत् थप बुलन्द पार्न र राज्यको एकात्मक चरित्रविरूद्ध कलम बोक्ने समूहहरू सदैव वैचारिक हिसाबले क्रियाशील रहनेछन्,’ भेला कार्यक्रमका संयोजक समेत रहेका मुकारुङ्ले भने ।
उनले राष्ट्रिय भेलाले संगठनको विधि विधान र आगामी कार्ययोजनाहरूको तय गर्ने उल्लेख गरे । भेलाको स्थानबारे आगामी बैठकले टुङ्गो लगाउने उनले बताए ।
त्यस्तै, बैठकले केन्द्रीय सदस्य डा. विष्णुकुमार सिञ्जालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विधान तयारी समिति समेत गठन गरेको संयोजक मुकारुङले सुनाए ।
समितिका अन्य सदस्यहरूमा डा. सोमबहादुर धिमाल, उत्तम सुनुवार, सीता तुम्खेवा र उर्मिला गम्वा थारू रहेका छन् । सो समितिलाई फागुन १५ गतेसम्म विधान निर्माण गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, भेलालाई केन्द्रित गरेर बैठकले राज्य समितिहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको सचिव बुद्ध योञ्जन लामाले जनाए । सबै राज्य समिति र सम्भव भएका प्रवास समितिहरूलाई फागुन १५ गतेसम्म पूर्णता दिइने सचिव लामाले बताए ।
उनले पहिलो बैठकमा केन्द्रीय समिति, राज्य समिति संयोजकहरू र विभिन्न मुलुकका प्रवास संयोजकहरू सम्मिलित भएको जानकारी दिए ।
गत माघ एक गते घोषणा भएको साहित्यकार मुकारुङको संयोजकत्वमा महासंघको ३४ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति, आठ राज्य समिति संयोजक र १४ प्रवास संयोजकहरू घोषणा गरेको थियो । साहित्यकार महासंघलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ(नेफिन)ले सम्बद्ध संस्थाका रूपमा मान्यता दिएको छ ।